Khamiis, Dec 31, 2020-Anita Kiki Gbeho oo loo magacaabay ku-xigenka wakiilka gaar ah ee Qarramada Midoobey – LaacibOnline
Khamiis, Dec 31, 2020-Anita Kiki Gbeho oo loo magacaabay ku-xigenka wakiilka gaar ah ee Qarramada Midoobey
Gbeho ayaa badali doonta Raisedon Zenenga oo reer Zimbabwe ah oo loo magacaabay kaaliyaha xoghayaha guud iyo isku duwaha howlgalka ee Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Liibiya. isaga oo looga mahad celiyay sida hufnaanta leh ee uu uga qeyb qaatay howlaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Af-hayeenka ee madaxa UN-ka.
Gbeho ayaa leh in ka badan 25 sano oo khibrad ah oo ku saabsan qorshaynta istiraatiijiyadeed, isku dubaridka iyo maaraynta arimaha siyaasada, horumarka iyo arimaha bini’aadanimada ee xarunta Qaramada Midoobay.
Gbeho waxey shahaado Bachelor-ka heysataa cilmiga bulshada iyo daraasaadka Afrika ee Jaamacadda Gobolka ee New York iyo shahaadada Mastarka ee xiriirka caalamiga ee Jaamacadda Ghana.
Waxey ka soo shaqeysay dalal ay ka mid yihiin Angola, Cambodia, Iraq, Namibia, Sudan iyo Somalia, waxey ku dhalatay gabadhan loo magacaabay ku-xigeenka wakiilka Qarramada Midoobey ee Soomaaliya magaalada Accra ee dalka Ghana, Ms. Gbeho waxay leedahay hal gabar.
← Talaado, Dec 29, 2020-Labo garab oo katirsan ururka Daacish oo ku dagaalamay buuralayda gobolka Bari
Khamiis, Dec 31, 2020-Axmed Madoobe oo si adag u weeraray siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee Arrimaha Doorashooyinka dalka →
Sabti, Aug 8 , 2020-Maraykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Soomaaliya iyo Kenya
Axad, July 19, 2020-Dalka Turkiga oo la wareegaya taliska Howlgallada badda ee Gacanka Cadan
July 19, 2020 Abdirisaaq 0
Axad, Nov 22, 2020-Musharixiinta xilka madaxweynaha oo baaq guddiyada doorashada ku saabsan u diray Jubbaland iyo Puntland